Kuchengeta Kwese - Foton mota Boka Co, Ltd.
global sevhisi system
Isu tinovimba pasirese yekuparadzira network kupa vashandisi vane zviyero zvigadzirwa, sevhisi, zvishongedzo, kudzidziswa uye rutsigiro rwehunyanzvi. Foton yakatanga "Total Care" sevhisi zvishoma nezvishoma. Ine 13-yega-inotsigira yedunhu nzvimbo yekuparadzira, 12 yedunhu sevhisi yekudzidzisa nzvimbo, anopfuura 1500 mhiri kwemasevhisi enetiweki, Foton yakagara ichivandudza yayo yepasirese system sisitimu yekugutsa vatengi inoda kuchengetwa uye nekupa zvakadzama zviitiko kwavari. Foton inotarisa kune vatengi inoda ruzivo rwekushambadzira uye inogadzira yakazara, inotakura yakasarudzika uye yehunyanzvi masevhisi kumutengi.
Zvikamu Distribution Center Around The World
chengetedza kutyaira kwakakwana
Zvese zvehupenyu hwekuchengetedza kuchengetedza kuve nechokwadi chekutyaira kwakakwana. Mhando dzakasiyana-siyana dzekuwedzera-kukosha dzinounza kukosha kwakawanda kune vatengi, kuratidza kutarisira kweFOTON kwechokwadi. Kubata hurukuro pahurukuro yenguva dzose kuti unzwisise zvido zvevatengi zvekuvandudza nekutsvaga kugona.
Yepamberi bvunzo uye yekugadzirisa zvishandiso, zvese-zvakapoteredza hardware garandi; inotungamira timu yebasa inoumbwa ine simba rekudzidzisa system uye nyanzvi dzevashandi vehunyanzvi.
Pasi rose rinotungamira PMS, EPC, WMS, DMS uye CRM ruzivo system yehutachiona manejimendi ye3-chikamu zvikamu zvekupa uye kuverenga (yepasirose zvikamu zvepakati, matunhu zvikamu nzvimbo uye chiteshi chebasa (yakasarudzika agency)), iyo inovimbisa yakatsetseka zvikamu zvikamu. kuongororwa online nevatengi.
100% chaiyo zvikamu, yakaderera mutengo, kuchengetedza mota kukosha; zviripachena zvikamu zvemutengo, rebasa reawa mutengo uye maitiro ekugadzirisa. nzira dzakatsetseka dzekunyunyuta kwevatengi.
KUMASHURE MBERI NETWORK
Vhara nzvimbo huru
FOTON yakagadza mhiri kwemakungwa sevhisi network ine 1,485 nzvimbo dzekutengesa munyika dzinopfuura makumi masere nematunhu, kusanganisira 168 nhanho-1 nzvimbo dzekutarisira masevhisi uye 1,317 nhanho-2 nzvimbo dzevatengesi vevashandi, uye 149 nhanho-1 vatengesi vekutengesa uye 1,205 nhanho-2 vatengesi vezvitengesi, vanofukidza matunhu makuru muAsia, America, Africa neEurope.
Iyo indasitiri-inotungamira sevhisi mutemo
Tichifunga nezvekugutsikana kwevatengi, FOTON yakashanda muindasitiri-inotungamira sevhisi mutemo kupa yakareba garandi nguva kune vatengi. Mutemo webasa unosiyana kubva pamhando, zvigadzirwa mitsara uye mamodheru. Kuti uwane ruzivo rwewewarandi mutemo uye yekumanikidza waranti mutemo, ndapota tarisa kune mutyairi waranti bhuku.
OVERSEAS KUSHANDIRA BASA
kwese-kwakatenderedza kudzidziswa kwebasa
FOTON yakagadza nzvimbo dzekudzidzisa gumi nemaviri muThailand, Russia, Vietnam, Saudi Arabia, Kenya, Cuba, Peru, Chile, Iran, Philippines, Columbia neAlgeria. FOTON ikozvino inopa makosi ekudzidzisa kune anopfuura zana nyika nematunhu. FOTON inopa vanotengesa masevhisi nezvose-zvakatenderedza kudzidziswa kwebasa kuburikidza nenzvimbo dzekudzidzisa dzebasa pasirese. Idzo nzvimbo dzekudzidzisa dzinopawo nhepfenyuro dzebasa nyowani nedzidzo pane manejimendi manejimendi uye matekinoroji ebasa kuitira kubatsira zviteshi zvebasa kuenderana neFOTON uye nekupa zvirinani sevhisi kune vatengi.
Chikwata ichi chave nevarairidzi makumi matatu, vanofukidza mitauro inodarika makumi maviri, kusanganisira Chirungu, ChiFrench, ChiSpanish, ChiArabic neRussia. Idzo nzvimbo dzekudzidzisa dzinopa kudzidziswa pane manejimendi ebasa, zvikamu zvekugadzirisa manejimendi neinjiniya yebasa, yakanangana nekupa mutengi wese chidzidzo cheupenyu hwese.